कोरोनाले उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको अटो व्यवसायलाई दशैँले राहत ! « Lokpath
कोरोनाले उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको अटो व्यवसायलाई दशैँले राहत !
काठमाडौं । गत चैत ११ गतेबाट जारी भएको लकडाउनले उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको नेपालको अटो व्यवसायलाई दशैँले राहत दिएको छ ।
दशैँको समयमा व्यवसायीहरुले व्यापार राम्रो भएको बताएका छन् । नेपाल अटो मोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष कृष्णभक्त दुलाल दशैँले अटो व्यवासायीहरुलाई राहत दिएको बताउछन् । लकडाउनका कारण सिथिल बनेको बजार साउन पछिको अवस्थामा केही माथि उठ्न सकेको उनले बताए । विगत वर्षहरुमा सवा लाख बढी सवारी साधन आयात हुने गरेकोमा यो वर्ष करिब साढे ८३ हजार सवारी आयात भएका छन् । अध्यक्ष दुलालले ४ हजार १ सय ३३ कार/जिप, ७० हजार २ सय ६० मोटरसाइकल र अन्य सवारी साधन २ हजार २ सय ९० वटा गरी ८३ हजार २ सय १४ सवारी आयात गरिएको बताउनुभयो । यो वर्ष १९ अर्ब ८२ करोड ८१ लाख ६ हजार बराबरका सवारी आयात भएका छन् ।
कोभिडका कारण सार्वजनिक सवारी साधनको अभाव भएको, संक्रमणको जोखिमका कारण पनि नीजि सवारी प्रयोग गर्नेहरुको संख्या बढेको बताए । सरकारले संक्रमणको जोखिमका कारण नयाँ लाइसेन्स वितरणको काम रोकेको छ । तर व्यवसायीहरुले भने लाइसेन्स वितरण रोक्न नहुने बताएका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय र सरकारलाई लाइसेन्स वितरण खुलाउन र अब सुरक्षित भएर व्यवसाय गर्ने वातावरण मिलाउन उनले आग्रह गरे ।
प्रकाशित मिति: २०७७,कार्तिक,१६,आईतवार १५:४३
कर तिर्न सरकारले गरेको ताकेताप्रति अटोमोवाइल व्यवसायीहरुको आपत्ति
काठमाडौं । नाडा एशोसियसन लगायत सम्पूर्ण अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले सरकारले कर तिर्नका लागि गरेको ताकेताप्रति आपत्ति जनाएका छन् । कोरोना महामारीको
काठमाडौं । नेपालको पहिलो विद्युतीय यात्री मोटरसाइकलको बुकिङ्ग खल्ती डिजिटल वालेटबाट सकिने भएको छ । यात्री मोटरसाइकलले पहिलो चरणमा १
मोटरहेड बाइक: निषेधाज्ञा अगावै बुकिङ गर्दा वा किन्दा हाल चलिरहेको स्किममा थप ५ हजार छुट
काठमाडौं । नेपालका लागि मोटरहेड बाइकको आधिकारिक वितरक एसएलआर टेक्नो एन्ड ट्रेडले निषेधाज्ञालाई मध्यनजर गरी ‘बुक अर बाई’ नामक नयाँ
काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा आक्रमक बजार विस्तार गर्ने रणनीति बनाएको बेनेलीले एकै पटक ३ वटा मोटरसाइकल बजारमा ल्याएको छ ।